အစားအသောက်တွေ ကြောင့် ၀ိတ်ပြန်တက်လာလို့ ၄-လ လောက် Gym ဆော့ပြီး လှပတဲ့ Body ကို ပြန်ရလို့ ထုတ်ကြွား လိုက်တဲ့ ခင်လေးနွယ် – Zeekwat Hot News
အစားအသောက်တွေ ကြောင့် ၀ိတ်ပြန်တက်လာလို့ ၄-လ လောက် Gym ဆော့ပြီး လှပတဲ့ Body ကို ပြန်ရလို့ ထုတ်ကြွား လိုက်တဲ့ ခင်လေးနွယ်
Celebrity NewsHot News
May 17, 20190919
ပရိသတ်ကြီးရေ…လီဆူတိုင်းရင်းသူလေး ခင်လေးနွယ်တစ်ယောက် Gym ကစားပြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သူမရဲ့ပြေပြစ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစားပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကို ချပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က သိပ်မကျစ်လျစ်ပဲ အဆီပိုအနည်း ငယ်ရှိ နေတဲ့ ဗိုက်
သားဟာ Gym လေးလ ကစားအပြီးမှာပဲ ကျစ်လျစ်ပြီး လှပသွားပုံက တကယ့်ကိုအမိုက်စားပါပဲ။ အနု ပ ညာအလုပ်တွေနဲ့ ခေတ္တ ခဏေ ဝးကွာသလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ခင်လေးတစ်ယောက် ကြော်ငြာလေး တွေလည်း ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ စကား
သံဝဲဝဲလေးနဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ တဲ့ အပျို ကြီးမမ ခင်လေးကို ပရိသတ်တွေက အရင်လို ဇာတ်ကားေ တွ မှာ ပြန်လည်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ဖို့ ကိုလည်း မျှော်လင့်နေကြပါ တယ်။ လေးလအတွင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ” ၄ လ
လောက်မရပ်မနားဆော့ပြီး ( ခရီးထွက်တဲ့ချိန်ကလွှဲလို့) မှ ရလာတဲ့ ပြောင်းလှဲမှု gym က ဆရာ Nick ရဲ့ ချော့တစ် လှည့် ငေါက်တစ်လှည့်နဲ့ စိတ်ရှည်စွာ train ပေးတာကြောင့် ဒီလို အနေထားလေး ရလာတာပါ အစားအသောက်လဲ အများကြီး ဆင်ခြင်ရပါတယ် ဆက်လက်
ပြီးတော့ ကြိုးစား သွားပါအုံး မည် ” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာဝေမျှလိုက်တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ပုရိသတွေ အားကျလောက်တဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ သူမကို ချစ်ရင် တခုခုပြောခဲ့နော်…………….။
အစားအသောကျတှေ ကွောငျ့ ၀ိတျပွနျတကျလာလို့ ၄-လ လောကျ Gym ဆော့ပွီး လှပတဲံ Body ကို ပွနျရလို့ ထုတျကွှား လိုကျတဲ့ ခငျလေးနှယျ
ပရိသတျကွီးရေ…လီဆူတိုငျးရငျးသူလေး ခငျလေးနှယျတဈယောကျ Gym ကစားပွီး ပွောငျးလဲသှားတဲ့ သူမရဲ့ပွပွေဈလှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုး အစားပုံရိပျတှကေို ပရိသတျတှကေို ခပြွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရငျက သိပျမကဈြလဈြပဲ အဆီပိုအနညျး ငယျရှိ နတေဲ့ ဗိုကျသားဟာ Gym လေးလ ကစားအပွီးမှာပဲ ကဈြလဈြပွီး လှပသှားပုံက တကယျ့ကိုအမိုကျစားပါပဲ။ အနု ပ ညာအလုပျတှနေဲ့ ခတ်ေတခဏဝေးကှာသလို ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ ခငျလေးတဈယောကျ ကွျောငွာလေး တှလေညျး ပွနျလညျရိုကျကူးနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့ တဲ့ အပြို ကွီးမမ ခငျလေးကို ပရိသတျတှကေ အရငျလိုဇာတျကားတှမှော ပွနျလညျပါဝငျ သရုပျဆောငျဖို့ ကိုလညျး မြှျောလငျ့နကွေပါ တယျ။ လေးလအတှငျးပွောငျးလဲသှားတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျတှကေို ” ၄ လ လောကျမရပျမနားဆော့ပွီး ( ခရီးထှကျတဲ့ခြိနျကလှဲလို့) မှ ရလာတဲ့ ပွောငျးလှဲမှု gym က ဆရာ Nick ရဲ့ ခြော့တဈ လှညျ့ ငေါကျတဈလှညျ့နဲ့ စိတျရှညျစှာ train ပေးတာကွောငျ့ ဒီလို အနထေားလေး ရလာတာပါ အစားအသောကျလဲ အမြားကွီး ဆငျခွငျရပါတယျ ဆကျလကျပွီးတော့ ကွိုးစား သှားပါအုံး မညျ ” ဆိုပွီး လူမှုကှနျယကျမှာဝမြှေလိုကျတာပဲဖွဈပါ တယျ။ ပုရိသတှေ အားကလြောကျတဲ့ အမိုကျစား ဘျောဒီကို ပိုငျဆိုငျထား တဲ့ သူမကို ခဈြရငျ တခုခုပွောခဲ့နျော…………….။
၀ါရင့် ဂိုးသမားကြီး ကာဆီးလက် ဘောလုံးလောက မှ အနားယူ ရတော့မယ် ပေါ်တို အသင်း ရဲ့ တာဝန်ရှိတွေ ပြော
Hey Buddy!, I found this information for you: "အစားအသောက်တွေ ကြောင့် ၀ိတ်ပြန်တက်လာလို့ ၄-လ လောက် Gym ဆော့ပြီး လှပတဲ့ Body ကို ပြန်ရလို့ ထုတ်ကြွား လိုက်တဲ့ ခင်လေးနွယ်". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/896. Thank you.